प्रचण्डले फेरि चाले यस्तो आत्मघा’ती कदम, अब के होला यसको परिणाम ? – News21Nepal
प्रचण्डले फेरि चाले यस्तो आत्मघा’ती कदम, अब के होला यसको परिणाम ?
काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन भन्दै दिएको निर्देशनको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवाद गर्नुभएको छ । उनले यो कदमलाई धेरैले आत्मघाती कदम भन्नुुभएको हो ।
प्रवक्ता पौडेलले शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि अथवा अन्य कुनै पदाधिकारीमा निर्वाचित भएको पाइए आयोगले अध्यावधिक नगर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
हुन त शिक्षकहरुले गाउँ गाउँमा राजनीतिक जागरण फैलाएको प्रचण्डको दाबी अमान्य हैन । तर शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेकै कारण विद्यालयको पढाइ डामाडोल भएको यथार्त पनि कसैले भुल्नु हुँदैन ।अनलाइन मार्ग बाट साभार
Tags: अब के होला यसको परिणाम ? प्रचण्डले फेरि चाले यस्तो आत्मघा'ती कदम
Previous पूर्व-पश्चिम राजमार्ग दिनभर बन्द गरेर एमाले महाधिवेशन उद्घाटन यसरी भयो ? भिडियो सहित…?
Next प्रचण्डले भने-: म प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन ! मेरो लागि देउवा जि केही हैन ?